खुसीको खबर !! अन्तत फिल्मी शै’लीमा यसरी पत्ता लाग्यो नि’र्म’ला प’न्त’को ह’त्या’रा ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/खुसीको खबर !! अन्तत फिल्मी शै’लीमा यसरी पत्ता लाग्यो नि’र्म’ला प’न्त’को ह’त्या’रा !
खुसीको खबर !! अन्तत फिल्मी शै’लीमा यसरी पत्ता लाग्यो नि’र्म’ला प’न्त’को ह’त्या’रा !
काठमाडौं : क’ञ्चनपु’रकी १३ वर्षीया बा’लि’का नि’र्म’ला प’न्त ब’ला’त्का’र र ह’त्या प्रकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख नायव महानिरिक्षक (डिआईजी) उत्तम सुवेदीले ल’गभग टुं’गा’एका छन्।
प्रदेश स’रुवा भएदेखि नै नि’र्म’ला प्र’करणको अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ रा’खेका डिआईजी सुवेदी ल’गभग एक बर्षको लामो अनुसन्धान पश्चात अ’भियु’क्तको न’जिक पुगेका हुन्। सरकार र प्रहरी सं’गठनलाई टा’उ’को दु’खा’ई’को बिषय बनेको नि’र्म’ला का’ण्ड डिआईजी सुवेदीले फि’ल्मी शै’लीमा अनुसन्धानलाई अ’गाडी ब’ढाएका थिए।
प्रहरी अ’भियु’क्त प’हिचा’नमा ल’गभग स’फल भएको छ। स्रोतका अनुसार डिआईजी सुवेदीले सो क्षेत्रका पू’र्वप्रहरीलाई समेत हा’तमा लिएर अनुसन्धानलाई नयाँ शै’ली’बाट उ’ठाएका थिए। केही प्र’हरीलाई अ’भि’यु’क्त ब’स्न स’क्ने स’म्भावित ठाँउको प’हिचान गरी विभिन्न भे’ष’मा प’रिचालन गरेका थिए।
‘अ’न्ड’र’क’भ’र अ’प्रे’श’न’का रुपमा प्रहरी प’रिचा’लित थिए। लामो समयसम्म अ’न्ड’र’क’भ’र रहेका कतिपय प्रहरी अधिकारीले ब’ला’त्का’र र ह’त्या प्र’करणसँग जो’डि’एका मानिसबीच अ’नुसन्धान’कै शि’लशि’लामा घु’लमि’ल भए। एक बर्ष लामो अ’नुसन्धान प’श्चात डिआईजी सुवेदीले अ’भियु’क्त प’हिचा’न गरे पनि प्र’मा’ण जु’टा’उ’न’को लागि केही दिन लाग्ने भएकोले सा’र्वजनिक गरेका छैनन्।
डिआईजी सुवेदीले नि’र्म’ला प’न्त’को ब’ला’त्का’र पश्चात भएको ह’त्या का’ण्डको अ’भि’यु’क्त अब चाँ’डै सार्बजनिक ग’रिने दा’बी गरे। ‘उ हाम्रो नि’ग’रा’नी’मै छ, केही टे’क्नी’क’ल कुराहरु पूरा भएपछि नियन्त्रणमा लि’ई सा’र्वजनिक ग’र्नेछौं’, उनले भने।
११ साउनमा नि’र्म’ला प’न्त’को ब’ला’त्का’र’पछि ह’त्या भएको दुई बर्ष ना’घेको थियो। पू’र्वप्रहरी म’हानिरिक्षक (आ’ईजी) सर्वेन्द्र खनालको पा’लामा उक्त घ’टना भएको थियो। घ’टना प’श्चात नेपाल प्रहरीको दुई ’आईजी खनाल र ठा’कुर ज्ञवालीले अ’बकाश पा’ईसकेका छन्।
सरकारमा भने प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बा’दल नै छन् । एक महिना अगाडि मात्र गृहमन्त्री थापाले अब चाँ’डै नि’र्म’ला’को ह’त्या’रा सार्वजनिक गरिने ब’ताएका थिए। ज’सको स’फलताको श्रे’य डि’आईजी सु’वेदीलाई जा’नेछ।
गाडी किन्दै हुनुहुन्छ भने यो मासिक किस्ता २२ हजारभन्दा कममै एसयूभी पाइने
३३ वर्षीया नेपाली चेली राधा भन्छिन्, ‘म मुम्बईको अस्पतालमा सात महिनादेखि छु, मलाई बचाउनुहोस्’
ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
अभिनेत्री पूजा र आँचलको यस्तो म्युजिक भिडियो बाहिरियो (भिडियो हेर्नुस )
कञ्चनपुरबाट एकाविहानै आयो यस्तो ड’रलाग्दो खबर ! मन थामेर हेर्नुहोला :